Waxyaabaha qarxa oo laga helay meel u dhow saldhig tareen ee New Jersey ee Maraykanka. - BBC News Somali
Waxyaabaha qarxa oo laga helay meel u dhow saldhig tareen ee New Jersey ee Maraykanka.
Image caption Kooxda waxyaabaha qarxa oo jooga goobta Elizabeth, New Jersey
Wax laga shakiyay oo laga helay meel u dhow saldhiga tareenka ee New Jersey ayaa qarxay kadib markii kooxaha waxyaabaha qarxa ay isku dayeen inay kala furaan iyagoo isticmaalaya robot, ayay sheegeen masuuliyiinta.
Waxay ahayd mid ka mid ah shan waxyaabood oo qarxa oo laga helay iyagoo ku jira boorso ama shandad yar oo ku jirta qashinka, meel u dhow saldhiga tareenka ee Elizabeth, sida uu sheegay Duqa magaalada. Qofna wax ma gaarin.
Waxyaabaha la helay ayaa ka danbeeyay kadib saddex weerar oo dhacay dhammaadkii toddobaadkii hore,- qarax ka dhacay New York, New Jersey iyo mindiyayn ka dhacday Minnesota.
Qaraxa ka dhacay New York ee xaafada Chelsea ayaa waxaa ku dhaawacmay 29 qof.
Elizabeth, ee New Jersey, boliiska ayaa kala furay waxyaabo qarxa Isniintii, kadib walaac laga qabay inay qaraxdo.
Duqa magaalada Christian Bollwage, ayaa sheegay in la qarxiyay waxyaabaha kadib markii robot uu jaray fiilo ku xirnayd.
Image caption Santuuqa ay ku jireen waxyaabaha qarxa ee ku qarxay Chelsea, New York
Boorso oo ay ku jiraan waxyaabo dhowr ah ayaa laga soo bixiyay qashinka, kadib markii laba nin ay ka soo bixiyeen qashinka oo u maleeyay inay ku jiraan wax qaali ah.
"Waxay billaabeen inay fiiriyaan boorsada markii ay arkeen fiilooyin iyo tubooyin kadibna boorsada ayay tuureen. Kadib waxay u tageen boliiska oo ay si degdeg ah ugu sheegeen" ayuu yiri Duqa magaalada.
Shan qof ayaa la xiray si su'aalo loo waydiiyo, ayay masuuliyiinta u sheegeen warfaafinta Maraykanka. Laakiin afhayeenka ayaa sheegtay inaan qofna la dacwayn, walina uu socdo baaritaanka.
1,000 ciidamada ammaanka oo dheeraad ah ayaa la geeyay goobaha gaadiidka ee New York.
Masuuliyiinta ayaa sheegay in weerarada New York, New Jersey iyo mindiyaynta Minnesota, inay ahaayeen fal argagixiso, waxayna isku dayayaan inay ogaadaan inay xiriir leeyihiin.
Waxay sheegeen inaysan u ekeen in kooxo caalami ah ay ka danbeeyeen.
Kooxda (IS) ayaa sheegtay in weerarka Minnesota uu ka danbeeyay mid ka mid ah askartooda. Lama oga in IS ay ka danbaysay qorshaynta weerarka.